Gabaasaa Cuunfaa Tarkaanfiilee Baatii Amajjii fi Guraandhalaa.Summary of OLA Actions January-February | Oromo Freedom News and Views
← Introducing New Oromo TV Based in Oslo, Norway – “TV ORO
Gabaasaa Cuunfaa Tarkaanfiilee Baatii Amajjii fi Guraandhalaa.Summary of OLA Actions January-February
Humni Addaa WBO baatii Amajjii fi Guraandhalaa keessa humna diinaa irratti tarkaanfii
gosa adda addaa fudhateen waraana diinaa kudhanootatti lakkaawamu hojiin ala taasisuu fi
qabeenyaa diinaa barbadeessuun injifannoo galmeesse; warra ajjeefame keessaa yoo xiqqaate
5 dabballootaa fi basaasota diinaa sadarkaa ol’aanaatti ummata rakkisuu fi hiraarsuun
beekaman tahuutu mirkanaawe. Tarkaanfiileen kun eessattii fi yoom akka fudhataman akka
armaan gadiitti ibsama.
Amajjii 28, 2013- Ollaa Finfinnee, ganda Galaan Guddoo
Humni Addaa WBO Amajjii 28, 2013 ganama saáa 8: 15 qarqara Finfinnee ganda qotee
bulaa Galaan Guddoo jedhamu keessatti Itti aanaa Biiroo Qulqullinaa fi Miidhagina
Magaalaa kan kutaa Magaalaa Yekkaa kan tahe dabballicha Shifarraa Garramoo jedhamu
irratti tarkaanfii maayyii fudhate. Qondaalli mootummaa kun balfa mana fincaanii magaalaa
Finfinnee keessaa waraabamee lafa ganda kanaa keessatti kuufamaa jiru irratti ummanni
gaaffii nurraa dhaabaa jedhu irra deddeebiée kaasaa ture humnaan ukkaamsuuf jecha ummata
walitti qabee doorsisuuf osoo garasitti sosso’aa jiruu Humna Addaa WBOtiin galaafatame.
Tarkaanfiin kun wayta fudhatametti konkolaachisaan dabballichaas madaa’uun beekameera.
Amajjii 25, 2013- Harargee Dhihaa, Ona Mi’eessoo
Humni Addaa WBO guyyaa eerame kanatti Harargee Dhihaa ona Mi’eessoo araddaa Odaa
Roobaa jedhamu keessatti qondaala poolisa Wayyaanee Ajajaa 50 Biraanuu (maqaan abbaa
yeroof kan hin baramin) fi basaasaa beekamaa waahila isaa tahe kan Hasan Huseen jedhamu
irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhate. Qondaalli poolisaa kunii fi basaastichi ummata naannichaa
hiraarsuudhaan seenaa yeroo dheeeraa warra qaban tahuun mirkanaaweerra.
Amajjii 26, 2013- Magaalaa Dirree Dhawaa
Guyyaa eerame kanatti Humni Addaa WBO magaalaa Dirree Dhawaa ganda Saabbiyaan
jedhamu keessatti qondaalota tikaa diinaa:
1. Siisaay (maqaan abbaa yeroof hin beekamne),
2. Abinnet Hagoos fi
3. Taaddasaa Geetinnat
jedhaman irratti tarkaanfii adabbii fudhate. Tarkaanfii kanaan qondaaltichi Siisaay jedhamu
battalumatti yoo ajjeefamu lamaan hafan akka hamaatti madeeffaman. Qondaalonni tikaa
sadanuu lammiilee Oromoo jiraatoo ganda Saabbiyaan tahan doorsisuu fi hiraarsuun
Guraandhala 2, 2013- Wallagga Bahaa, ona Haroo Limmuu
Humni Addaa WBO godinaa kana keessa sosso’u guyyaa eerame kanatti ona Haroo Limmuu
fi Yaasoo gidduutti kan argamu bakka Abbaa Mo’aa jedhamutti basaastotaa fi saamtota
Wayyaanee maqaa investarummaatiin lafa kana qubatatanii ummata Oromoo saamanii fi
hiraarsisan irratti tarkaanfii adabbii fudhachuun akka hamaatti madeesse. Basaastonni
tarkaanfiin irratti fudhatame kunniin:
1. Leewii Bayyanee (abbaa qabeenyaa)
2. Admaasuu Baarnaabaas (abbaa qabeenyaa) fi
3. Caannee Asaffaa (waardiyyaa investaroota lamaanii)
yoo tahan, waytuma tarkaanfiin kun fudhatametti tiraakterri qonnaa lakkoofsi gabatee ishee
A.A.04374 tahe ibiddaan barbadeeffamteetti. Tarkaanfiin gooticha WBOtiin fudhatame kun
kan diina naasisee yoo tahu, jiraattota naannichaa ammoo haalaan kan gammachiise akka
Guraandhala 5, 2013- Wallagga Bahaa, ona Saasiggaa
Guyyaa eerame kanatti Humni Addaa WBO godinicha keessa sosso’u ona Saasiggaa bakka
Goottoo jedhamtu tan magaalaa Naqamtee irraa K.M. 26 fagaattee argamtu irratti dabballee fi
basaasa Wayyaanee beekamaa kan tahe namticha Tewoldee Eliyaas jedhamu irratti tarkaanfii
maayyii fudhate. Qondaalli diinaa hojii dabballummaa fi basaastummaa geggeessuun
beekamu kun onoota Giddaa, Guutoo Waayyuu, Diggaa Saasiggaa fi Heebantuu keessa
naanna’uudhaan ummata basaasee hiisisuu fi doorsisuudhaan beekama. Tarkaanfiin kun kan
fudhatame osoo dabballichi makiinaa fe’iisaa ummataa tokko yaabbatee Saasiggatti galuuf
jedhuu karaa irratti dhaabsisuun yoo tahu, konkolaachisaa ummataa san irratti balaan tokko
illee osoo hin gahin barnoonni dammaqiinsaa kennameefii geggeeffameera.
Guraandhala 18, 2013- magaalaa Mi’eessoo
Humni Addaa WBO Oromiyaa Bahaa keessa sosso’u guyyaa eerame kanatti magaalaa
Mi’eessoo keessatti kan argamu buufata boba’aa Shell kan qabeenyaan isaa basaasticha
TPLF tahe irratti haleellaa fudhateen faayidaan ala taasise. Abbaan qabeenyaa Shell kanaa
maqaa Aabboo jedhamuun kan beekamuu fi basaastummaadhaan ummata naannichaa kan
rakkisaa turee fi gorfamees kan deebi’uu dide wan taheef tarkaanfiin kun irratti fudhatame.
Guraandhala 18, 2013- ona Mi’eessoo- Tarkaanfii ummataa
Guyyaa kanatti ona Mi’eessoo bakka Bordoddee jedhamutti basaastotni Wayyaanee
lammiilee Oromoo fi Soomaalee gidduutti walitti bu’iinsa eega qabsiisanii booda Soomaalota
tumsanii lammiilee Oromoo hidhannoo-maleeyyii rukutaa fi rukuchiisaa turan. Ummatni of
ittisuuf tarkaanfii waraana diinaa lammiilee Oromoo rukutuuf hidhatee naannicha qubate
irratti fudhateen diina irraa 7 battalumatti yoo ajjeessu 9 akka hamaatti madeesse.
Guraandhala 19, 2013- ona Mi’eessoo
Humni Addaa WBO guyyaa kanattis humna diinaa kan dirmannaa tarkaanfii farra
ummatummaaf konkolaataatti fe’amee bakka lolli tahetti sosso’aa ture irratti haxxee
hidhuudhaan konkolaataa fi waraana irratti fe’amee ture barbadeesseera. Lakkoofsi waraana
konkolaataa san irratti fe’amee turee yeroof hin gabaafamne tahu illee, tarkaanfiin kun akka
malee kan diina baaragsee fi lammii gammachiise tahuun hubatameera.
Guraandhala 23, 2013- Wallagga Bahaa, ona Haroo Limmuu
Humni Addaa WBO guyyaa kanatti ona Haroo Limmuu bakka Tikishaa jedhamutti humna
waraana diinaa irratti haxxee hidhuun tarkaanfii fudhateen 4 irraa ajjeesee 3 madeesse. Wayta
tarkaanfiin kun fudhatametti humna diinaa irraa qawweeleen AK47 lama booji’amuun
qabeenyaa WBO taasifamaniiru.
Gama biraan ummanni onuma Haroo Limmuu fi Galiilaa gama isaatiin tarkaanfii akka
ummataatti fudhateen waajjira gandoota onichaa fi mana murtii onichaa ibiddaan
barbadeessuun beekameera. Ummanni tarkaanfii kana kan fudhateef manni murtii onichaa
haqa jal’isee lammiilee nagaa sobaan yakkee adabuun kan beekamuu fi akkasumas, hojiin
bulchitoota gandeeniis imaammata farra haqummaatiin ummata doorsisuu waan taheef
diddaa mootummaa agarsiisuuf akka tahe beekameera.
Walumaa galatti WBOn Oromiyaa bakkoota adda addaatti baatii lamaan dabran kana keessa
tarkaanfii haleellaa fudhateen qondaalota diinaa gurguddoo ajjeefaman shanan dabalatee
waraana diinaa kudhanoota ajjeessuu fi madeessuun, akkasumas, qabeenyaa diinaa kan akka
konkolaataa, tiraakteeraa, buufata boba’aa fi kan biroos barbadeessuun diina irratti kasaaraa
humna namaa fi dinagdee dhaqqabsiiseera. Tarkaanfiin waraanaa haqa ummata Oromoo
cunqurfamee fi daandiin qabsoo karaa nagayaa itti cufamee falmuuf fudhatamu kun
Oromiyaa guutuu keessatti jabaatee kan itti fufu tahuu ajajni Humna Addaa WBO
Posted on 03/03/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	Leave a comment.